William Gallas Oo Hadal Si Bilaa Naxariis Ah Anthony Martial Ugu Sheegay Sababta Looga Reebay Xulka Qarannka France Ee Koobka Aduunka. – GOOL24.NET
Halyaygii hore ee xulka qaranka France isla markaana ka soo ciyaaray kooxaha Arsenal iyo Chelsea ee William Gallas ayaa hadalo aan naxariis lahayn ku sifeeyay sababtii Anthony Martial looga saaray liiska xulka qaranka France u matali doona koobka aduunka. William Gallas ayaa eedayn u soo jeediyay Martial wuxuuna sheegay in uu isagu iska lumiyay fursada uu Russia ugu matali lahaa France.
William Gallas ayaa si cad u sheegay in aanu la murugaysnayn Martial maadaama oo uu soo qaatay xili ciyaareed uu hoos u dhac iyo sare u kac ku soo jiray, wuxuuna ku dooday in wali uu da’yar yahay oo uu wax ka baran karo qaladaadkii uu sameeyay intii xili ciyaareedku socday.
William Gallas oo Martial ka hadlaya ayaa yidhi: “Anigu murugo lama dareemayo isaga, sababtoo ah fursada ayuu haystay. Dhawr jeer oo hore ayuu kooxda ku jiray, waxaan filayaa in uu iska lumiyay fursadii uu koobka aduuka ku tagi lahaa”.
William Gallas oo ka hadlaya sababta Martial looga reebay liiska 23 ka xidig ee xulka qarankiisa France u matali doona koobka aduunka ayaa yidhi: ” Isagu sidiisa ugu fiican bandhig umuu samayn xili ciyaareedka oo dhan, si aad koobka aduunka u tagto waxaa waajib kugu ah in xili ciyaareedka oo dhan aad bandhig samayso”.
Ugu danbayn William Gallas oo Martial ku eedaynaya in hoos udhac iyo sare u kac uu qaab ciyaareedkiisu ka dhexeeyay ayaa yidhi: ” Ma woodid sare u kac iyo hoos u dhac, taasi waa wax farqiga sameeya. Isagu wali wuu da’yar yahay, laga yaabee in uu wax ka barto. Tayo fiican ayuu leeyahay ceeb ayayna isaga ku tahay”.
Anthony Martial ayaa si wayn mugdi loo galinayaa mustaqbalkiisa Manchester United waxaana lala xidhiidhinayaa kooxaha Tottenham, Chelsea, Arsenal, Juventus iyo Paris Saint-Germain iyada oo la filayo in uu xagaagan ka bixi karo Old trafford.
LIVE: TOOS U DAAWO France vs Peru – #WorldCup